ကံကောင်းသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကံကောင်းသူများ	11
Posted by အောင် မိုးသူ on Jan 29, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 11 comments
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ကို ကျတော်ဟာ သေသေချာချာ မခံစားရခဲ့ဘူး။
နေ့မတက်ရလို့ အဝေးသင်တက်ခဲ့ရပေမယ့် အနီးကပ် (၁၀)ရက်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ခံစားရပေမယ့်
သူတို့လောက် ကျတော်တို့ ကံမကောင်းခဲ့တာ အမှန်ပါ။ အခု ကျတော်နဲ့ရွယ်တူ ကျတော့်သူငယ်ချင်း
တွေက အစပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လေးတွေ မြင်ရချိန်မှာသော သူတို့လို ကျတော့်မှာလည်း
သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပါသေးလား ဆိုတာကို တွေးရင်း။
တိုက်ဆိုင်တာက သူတို့လည်း စီးပွားရေးကျောင်းသား
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကျော်နဲ့တူတူပဲ အဲကနေ ဒဂုံကို အဝေးသင်နဲ့ ပြန်ပြောင်းလိုက်တာ
အခုတော့ ကျပန်း လုပ်စားနေတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ကျော်က ဒဂုံကပါပဲ
လူငယ် အရွယ် လွန်လာမှ သိသိလာတာ လူငယ် ဘဝ ပေါ့ပါးမှုက အစားပြန်မရ။
ပျော်အောင် နေခဲ့နိုင်တဲ့ သူတွေက လောကရဲ့ ဆုလာဒ် ရတာ။
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ပါ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကနေ အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကို ရထားစီးခဲ့တာ အမှတ်တရပဲ။
သင့်အေးရိပ် says: ပုံတွေ ကြည့်ရတာ..ပျော်စရာကြီး…
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ပါ့ ပျော်စရာကြီး
uncle gyi says: ပျောက်ဆုံးသွားသော…
Ma Ma says: အဲဒါကြောင့်လည်း ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာ အပျော်ဆုံးအချိန်တွေပဲလို့ ပြောကြတာ။
ကျောင်းတက်ချိန်တုန်းကတော့ စာဖတ်ရ ကျက်ရနဲ့မို့ အဲဒီစကားကို လက်မခံချင်ခဲ့ဘူး။
ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှာ ဒီစကားတယ်မှန်ပါလားလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .တကယ်ကကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာအဲ့လိုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ခဲ့ကြရမှာ…တို့တုန်းကလည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်..ခုလိုကင်မရာမပေါသေးတော့အဲ့လောက်တော့မှတ်တမ်းမတင်နိုင်ခဲ့ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေက ပြောတယ်.. စာကျက်ရတာလောက် သက်သာတဲ့အလုပ် မရှိဘူးတဲ့… ကိုယ်က လုံးဝ လက်မခံဘူး.. စာဆိုတာ မေ့ပစ်လို့မှ မရတာ.. အလုပ်က အလုပ်ချိန်ကုန်ရင် မေ့ပစ်လိုက်လို့ ရတာမျိုး လို့..
ခုမှ ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်လွမ်းမိတယ်..
သများ MBA တက်ချင်တယ်ရော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: တက္ကသိုလ်တက်ချင်တာများ.. ပိုက်ပိုက်ရှိ….တက်လို့ရသဗျ..။
ယူအက်စ်လိုနိုင်ငံကျ… ပြန်မရဆိုကြတာက… အထက်တန်းကျောင်းသား.. ကောလိပ်ကျောင်းသားဘ၀မျိုး…။
မြန်မာပြည်မယ်.. prom လို…။ Coming of age day သက်နုပူဇော်ပွဲအထိမ်းအမှတ်နေ့လို.. ပွဲပါတီလေးတွေလုပ်သင့်တယ်…။ ဦးဆောင်မယ့်သူရှိရင်.. ရံပုံငွေထည့်ပေးမယ်..။ လူငယ်တွေဘ၀..အမှတ်တရများနဲ့ ပျော်ကြစေချင်…။
prom –aformal dance, especially one held byaclass in high school or college at the end ofayear.
Coming of age isayoung person’s transition from beingachild to being an adult. The certain age at which this transition takes place changes in society, as does the nature of the change.